Izifo zemithi yeMaple - Imithi
Izifo zemithi yeMaple
Izifo zemaple ezahlukeneyo zinokubangela iingxaki kwimithi oyithandayo. Ukuba uyazi ukuba ujonge ntoni, unokuqonda ukuba zeziphi iingxaki ezinobuzaza nezinokungahoywa.
Esinye sezifo zemithi yemephu esaziwa ngokuba yi-maple wilt. Izinto ezibangela ukuba zibekho I-Verticillium emhlophe-mnyama okanye iVerticillium dahliae , Ezingumngundo ezifumaneka emhlabeni. Le yingxaki eqhelekileyo nembi kakhulu enokuthi ibulale nemithi esekwe. Imephu ibonakala ixhaphake kakhulu kwiimephu zaseNorway kodwa ikwafumaneka kwisilivere, iswekile, obomvu, isikamore kunye neemephu zaseJapan.
Imaphu iya kuthanda-Cofa apha ukujonga umfanekiso omkhulu
Iswekile yeMaple Tree Umfanekiso
Isikhokelo sokuchongwa komthi ngamanyathelo alula
Isithombo somthi sasimahla
Inkcazo: Umthi onemaple wilt unokuba namagqabi amdaka ngebala okanye atshile, kwaye amasebe agulayo aya kuba nexabiso elincinci lamagqabi ajonge ukugula. Ngamanye amaxesha imibala enemibala yomnquma iya kufumaneka kwi-sapwood yomthi ochaphazelekayo. Sika i-bark kwaye ujonge le mijelo, emva koko thabatha i-bark kwi-Ofisi yakho yoLwandiso ukuze uqinisekise.
Isasazeka njani: Esi sifo siqala kwingcambu size sinwenwele ngomthi omsundu ukuya kumasebe aphezulu emithi, sibangele ukuba amalungu amakhulu omzimba aqale ukubuyela emva.
Uthintelo: Umthi ophilileyo, onamandla, owomeleleyo unokukwazi ukubetha imephu, kodwa uninzi lwemithi luya kufa lingaphelanga ixesha okanye ezimbini zokubonisa iimpawu. Ngelishwa, eyona ndlela yokulawula esi sifo kukutshabalalisa imithi enesi sifo ukuze singasasazeki. Ukuba ayisiyiyo inketho, okanye umthi awosulelekanga kakhulu, ukuthena amasebe achaphazelekayo kunokunceda umthi uphile. Gcina umthi unkcenkceshelwa kakuhle ngeli xesha uzama ukuphilisa.
I-Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) ibhekisa kwiqela lezifo ezibangelwa ngumngundo, kwaye inokuchaphazela nemithi emininzi enomthunzi. Ifungi efanayo ihlasela eminye imithi enjenge-sycamore, i-oki emhlophe, i-elm kunye nemithi ye-dogwood. Zibangela ilahleko yamagqabi kwaye zihlala zingenabungozi xa isifo sihlasela kube kanye.
I-Anthracnose kunye negqabi elomileyo-cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Imephu ye-anthracnose-Cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
I-Anthracnose-Cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Inkcazo: Olu hlobo lwefungus luqheleke kakhulu emva kobushushu obungafaniyo, ubusika obumanzi kwaye lunokuchaphazela ukwakheka kwehlumelo, lubulale amagqabi amancinci kunye namagqabi, okanye lubangele ukulahleka kwangoko kwamagqabi. Kwimithi yemephu, ibangela amabala amdaka okanye ansundu kunye nemivimbo kufutshane nemithambo emagqabini, kwaye umthi ungalahla amagqabi ngaphambi kwexesha. Ukuba umjikelo wesifo uphinda-phinda unyaka nonyaka, umthi unokumiswa okanye ukhubazeke kuba awunawo amagqabi amade ngokwaneleyo ukuba angakhula.
Isasazeka njani: I-anthracnose isasazeka ngundo ohamba ngomoya kwaye ixhaphake kakhulu ngexesha lentwasahlobo okanye emvula. Kwimithi yemephu, isasazeka ngo-Epreli okanye ngoMeyi kwiindawo ezininzi zokulima. Umoya uvuthuza kwimithi eyosulelekileyo kwaye usasaze iintsholongwane kwimithi emitsha yemephu. Imithombo emanzi ibonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokubamba iintsholongwane.
Uthintelo: Kubalulekile ukukhupha onke amagqabi awileyo ukuwa ngakunye kunye nokuwatshisa okanye ukuwatshisa (ukuba indawo yakho ivumela ukutshiswa.) Amagqabi awileyo anika indawo efanelekileyo yokuzalela i-anthracnose. Olunye ukhetho kukufumana i-arborist yokutshiza i-fungicide ekhethekileyo enekhemikhali ebizwa ngokuba yi-mancozeb emithini. Ukuba umonakalo uqhubeka unyaka nonyaka, unokubeka umthi kwezinye iingxaki.
Esinye isifo semaple esiqhelekileyo sisifo setha, esinokubangelwa yenye yeefungi ezimbini ezahlukeneyo: R. punctate okanye iRhytisma acerinum .
Indawo yetha kumagqabi afileyo-cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Indawo yetha-Cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Inkcazo: Indawo yetha sisifo esibi kodwa esingenabungozi esihlasela iintlobo ezininzi zemephu. Njengokuba igama layo lisitsho, isifo setela sikhangeleka ngokungathi ngamabala amakhulu amnyama phezulu kumagqabi.
Isasazeka njani: Usulelo luqala ekuqaleni kwentwasahlobo kwaye luyaqhubeka nasekuqaleni kwehlobo. Lo mngundo uyakwazi ukubamba xa kukho imozulu emanzi ethe gqolo ethintela amagqabi ukuba angomi. Amabala egqabi aqala aphuzi kwaye aguquka abe mnyama, umbala wetela.
Uthintelo: Unyango ngokubanzi alukhuthazwa kwindawo yetela kuba ayisoloko iyingxaki enkulu; Nangona kunjalo, ukukha amagqabi awileyo kuya kugcina indawo yetha.
sapstreak (ICeratocystis coerulescens (C. virescens)) sisifo sokungunda esichaphazela iimaphu zeswekile. Sisifo esibulalayo esichaza iinkuni, ngenxa yoko ukuhlangulwa akunakwenzeka. Esi sifo sibonakala kakhulu kwiindawo ezithile zaseNorth Carolina, eMichigan, eWisconsin naseVermont.
sapstreak-Cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Inkcazo: Esi sifo sibangela amahlamvu kwisithsaba somthi ukuba sibe sincinci, kwaye amabala e-bald ahlala evela.
Isasazeka njani: Ixesha elingaphezulu eli liyasasazeka kwaye umthi uyafa ekugqibeleni. Xa umthi ugawuliwe, ipatheni ebengezelayo iya kubonakala emthini wenxalenye esezantsi yomthi.
Uthintelo: Olona hlobo kuphela lokuphelisa i-sapstreak kukusika umthi ngokukhawuleza emva kokuqaphela ingxaki. I-Sapstreak ingasasazeka ngoncedo lwezinambuzane ngamanxeba emithini, ke ukususwa kwemithi enesifo kubalulekile ukugcina eminye imithi isempilweni, ukuba uneemaphu ezininzi.
Njenge-anthracnose, indawo yegqabi le-phyllosticta (phyllosticta minima) ibangelwa ngundo.
phyllosticta - cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
phyllosticta-Cofa ukujonga umfanekiso omkhulu
Inkcazo: I-phyllosticta ibangela ukuphakama kwamagqabi amnyama okanye amnyama. Amabala anokujika ome kwaye aphuke kwaye aqhekeke, ashiye imingxunya kumagqabi emephu.
Isasazeka njani: Njengakwi-anthracnose, ukungunda okubangela i-phyllosticta ichitha ubusika bayo ifihle phakathi kwamagqabi awileyo emhlabeni. Ilinda de kube sentwasahlobo, xa iimeko ezifumileyo ziyinika ithuba lokusasazeka. Iimpepho zithwala ii-spores ziye kwimikhosi emitsha.
Uthintelo: Rake amagqabi awileyo ekwindla nganye kwaye uyilahle ngokufanelekileyo ukuthintela izifo zokungunda ezinje nge-phyllosticta.
Ukuthintela izifo zemithi yeMaple
Into efanelekileyo ongayenza kwimithi yakho ukuyikhusela kwizifo zemithi yemephu kukuyikhathalela kakuhle ngaphambi kokuba ivelise isifo. Oko kuthetha ukuba amanzi rhoqo, afake isichumiso qho ngonyaka, gcina indawo ejikeleze imithi icocekile, prune xa kukho imfuneko kwaye ufune uncedo kwangoko ukuba ubona umthi wakho ujongeka ugula okanye unengxaki.
Ukukhulelwa Impilo Nokuzilolonga Iivithamini In Food Ngaphakathi Design Styles Ukutya Uhlahlo Lwabiwo-Mali
uthini umbala kwiringi yemood
yintoni eyona nja inobungozi emhlabeni
ungaxelela njani ukuba ikati iyafa
ngubani ommemayo kwitheko lokuzibandakanya
indlela yokwenza amehlo e-hazel pop
bangaphi abantu abaneefowuni ezikrelekrele